फेसबुकमा समाचार लिंक पोष्ट गरेर पैसा कमाउने बाटो बन्द: व्यवसायिक पोष्ट कम प्राथमिकतामा !
फेसबुकको न्यूजफिडमा केहि दिन भित्रै व्यापक फेरबदल हुने
फेसबुकले व्यवसाय, ब्रान्ड र मिडियाका पोस्टहरुलाई कम महत्व दिने गरी आफ्नो न्यूज फिडमा परिवर्तन गर्ने भएको छ । यसको साटो पारिवारिक र साथीभाइबीचका कुराकानीलाई प्राथमिकतामा राखिने फेसबुकका प्रमुख कार्यकारी मार्क जुकरबर्गले आफ्नो पेजमा उल्लेख गरेका छन् । यसको परिणामस्वरुप व्यवसायिक संगठनहरुले आफ्नो पोष्टहरुको लोकपि्रयता घटेको महसुस गर्ने उनको स्वीकारोक्ति छ ।
आगामी केही हप्ताभित्र नयाँ परिवर्तन लागू भइसक्ने छ । ‘हामीले हाम्रो समुदायबाट के फिडब्याक पायौं भने व्यवसाय, ब्रान्ड र मिडियाका पोष्टहरुले हामीलाई एक अर्कासँग नजिक ल्याउने व्यक्तिगत क्षणहरुलाई ओझेलमा पारिदिए’ जुकरबर्गले लेखेका छन् ।
मानिसहरुको खुशीका लागि फेसबुक उपयोगी छ भनेर सुनिश्चित गर्नु आफूहरुको दायित्व रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘नयाँ परिवर्तनपछि मानिसहरुले फेसबुकमा कम समय बिताउँदा पुग्छ,’ जुकरबर्ग भन्छन्, ‘तर उनीहरुले बिताएको समय बढी मूल्यवान हुनेछ ।’
यसअघिको पोष्टमा जुकरबर्गले सन् २०१८ मा फेसबुकलाई ‘ठीक’ बनाउने भन्दै यसको दुरुपयोग रोक्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।फेसबुकलाई देश तथा राज्यहरुबाट जोगाउने पनि उनले बताए । हालैका विश्लेषणहरुले ईंगित गरेका छन् कि रुस लगायतका देशहरुले फेसबुकमा आएका विषयवस्तुलाई तोडमोड गर्ने गरेका छन् ।
हेर्नुस जुकरबर्गको फेसबुक पोस्ट
६ घन्टा फेसबुक बन्द हुँदा फेसबुक मालिक जुकरबर्गले ६ अर्ब बढी डलर गुमाएकै हो त ?
धन सार्कीले बेलायतमा शुरू गरेको ‘पोष्ट अफिस’ मेयरले गरे रिबन काटेर उद्घाटन